होलीमा ओलीको शुभकामना - होली विशेष - साप्ताहिक
- जितु नेपाल (मुन्द्रे)
मेरा अप्ठ्यारा देशवासीहरू !
तपाईंहरूलाई होलीको उपलक्ष्यमा ओलीको शुभकामना । तपाईंहरू दु:खी भए पनि म असाध्यै खुसी छु, त्यसैले भन्न चाहन्छु— आई एम ह्याप्पी ओली ।
सर्वप्रथम त देशले एउटा राम्रो हास्यकलाकारसहितको प्रधानमन्त्री पाएकोमा तपाईंहरूलाई बधाई छ । टेलिभिजनबाट प्रसारण भैरहेका हास्यशृंखलाहरू बन्द भैरहेका बेला ममाथि आएको ठूलो जिम्मेवारीलाई मैले चुनौतीका रूपमा लिँदै तपाईंहरूलाई सकभर हँसाइरहेको छु र निरन्तर हँसाइरहने प्रयास गर्नेछु । हँसाउनका लागि सीधा र राम्रा कुरा गरेर हुँदैन, अलि फरक कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिले नै बुझिसकेकाले मलाई त्यति गाह्रो भएन । त्यसमाथि म पनि उखान–टुक्काको त नेपाल शिरोमणि नै हुँ भन्दा फरक नपर्ला ।
म अझै पनि भन्छु— एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङको अन्त्य हुन्छ । यो मैले भन्ने कुरा हो र म प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म भनिरहन्छु । २०७३ लागेपछि पनि एक वर्षभरि भनिरहन्छु । २०७३ सालभरिलाई मैले भन्ने कुरामध्ये यो पहिलो नम्बरमा पर्नेछ ।
घरघरमा ग्याँसको पाइप फिट गर्दिन्छु । यो कुरा मैले किन भनेको भने अहिले मेलम्ची आयोजनाले फटाफट घरघरमा पाइप जडान गरिरहेको छ । मेलम्चीको पानी कहिले आउने हो पत्तो छैन । पानी नआउन्जेल त्यो पाइपमा ग्याँसको सिलिन्डर फिट गर्दा भैगो नि ।
हाम्रो देशमा ग्याँस, तेल र रेल नभएको होइन र’छन् । यो कुरा मैले पत्ता लगाइसकें । देशमा तेल पनि र’छ, ग्याँस पनि र’छ र रेल पनि र’छ । जस्तै– तेलमा रम्तेल, दिक्तेल, भुर्तेल आदि । त्यस्तै रेलमा खरेल, गजुरेल आदि रहेछन् । त्यसैगरी ग्याँसमा ग्याँस्टिक, प्राय: सबै नेपालीको पेटमा ग्याँस हुन्छ । ग्याँस नभएका नेपाली काँ छन् ?
देशमा त्यत्रो नाकाबन्दीले डिजेल, पेट्रोलको हाहाकार हुँदा पनि कसैले पेट्रोलपम्पमा लाइन बस्न जानु परेन । यो सुविधा जनताले उपयोग गर्न पाए । किनभने पेट्रोल, डिजेलको लाइन घरैसम्म आइपुग्यो ।
हावाबाट बिजुली निस्कन्छ भन्दा मलाई हावा कुरा गर्‍यो भने । यो कुरै हावाको छ त अरू के भन्छन् ? हावा चल्दा बिजुली चम्किँदैन ? हो, त्यही चम्किएको बिजुलीबाट पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनेको हो मैले ।
मलाई मन्त्रालय फुटायो भन्ने आरोप छ । यसमा म के भन्छु भने– मैले फुटाउन सक्ने भनेकै त्यही र’छ त अरू म के फुटाउँm ? टाउको फुटाउँ भने सकिंदैन, पार्टी फुटाउँm भने आफैं अध्यक्ष छु, के फुटाउनु ? त्यसैले आफूले जे सकें जे जानें, त्यही फुटाएँ ।
सबैले मन्त्री धेरै बनायो भन्छन्, उपप्रधानमन्त्री धेरै बनायो भन्छन् । म यसमा के भन्छु भने म थोरैमा रमाउने मान्छे होइन । ओली सानो टोलीमा विश्वास गर्दैन । मन्त्रीको अगाडि एउटा सानो उपमात्र थपिदिएको हो र सभासद्लाई ५ हजार तलब बढाएको मात्र हुँ । मन्त्री यति जना हुनुपर्छ भनेर ठ्याक्क तोक्नलाई के यो सरकार परिवार नियोजन हो र— दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भन्नलाई । कहिले कम हुन्छ कहिले बढी हुन्छ ।
मेरो कार्यकालमा अरू काम के हुन्छ भन्न सक्दिनँ, तर मबाट हँसाउने काम अवश्य हुन्छ । हास्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिनु इतिहासमै एउटा नयाँ रेकर्ड हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
लु सबैलाई म फेरि पनि भन्छु– म जति ह्यापी नेपालमा अरू कोही छैनन् । त्यसैले त मेरो नारा छ— ह्याप्पी ओली । होली आउँछ जान्छ तर ओली जाँदैन— ओली इज ओली ।
भद्र ओलीको 'छोडेर गयौ'
मस्कोमा कोमल र बद्रीको दोहोरी
रसियामा ओलीको पहिलो कार्यक्रम
मलाई मेरै बूढी ठीक फाल्गुन १८, २०७४
बालबच्चा जन्माउन ब्रेक टाइम फाल्गुन १८, २०७४
खाने मुखलाई फरक पर्दैन फाल्गुन १८, २०७४
फेस पेन्टिङ फाल्गुन १७, २०७४
जिग्रीले देश चलाउँछ फाल्गुन १७, २०७४
मधुमेहमा डाक्टरसँग फाल्गुन १७, २०७४
बलिउड चलचित्रमा होली फाल्गुन १७, २०७४
मन नपर्ने लोला फाल्गुन १७, २०७४
विवाहित कि अविवाहित भन्न चाहन्न फाल्गुन १६, २०७४
कपाल खौरेर चुम्बन गर्ने फाल्गुन १६, २०७४